Amacandelo kuzo zonke ii-eReaders
I-Todo eReaders yibhlog yabantu abatya iincwadi abathi, ukongeza kwiphepha, bafuna ukuzifunda kwizixhobo ze-elektroniki. Ulwazi oza kulifumana kule bhlog luhlu ukusuka kwiincwadi ukuya kwizixhobo ukuze uzifunde, ngesoftware eya kukuvumela ukuba uguqule isicatshulwa sibe kwifomathi efanelekileyo ye-eReader yakho.
Kuzo zonke ii-eReaders sikwathetha ngabenzi abaphambili bolu hlobo lwesixhobo, esiza kukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona ilungele iimfuno zakho. Kwelinye icala, uya kufumana ulwazi olunxulumene nolunye uhlobo lwezixhobo zehardware, ezinje ngezixhobo, iitafile okanye uhlengahlengiso onokuthi ulwenze kwi-eReader osele unayo.
Kodwa le bhlog ayizukugqibelela ngaphandle kweendaba zangoku, apho uyakufumana ukukhutshwa, iindaba malunga nababhali kunye noncwadi ngokubanzi. Unawo onke amacandelo akhoyo ngezantsi. Eyethu Iqela labahleli ezikhethekileyo inoxanduva lokuzigcina zihlaziywa ukuze uhlale usazi ngoku.